‘एमसीसीको टुंगो पार्टीले लगाउँछ, प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ ’ - Aarthiknews
‘एमसीसीको टुंगो पार्टीले लगाउँछ, प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ ’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ । युवावस्थामै कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका उनीसँग सरकारको नेतृत्व गरेको अनुभव पनि छ । केही समय यता बिबादित बन्दै आएको र चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको नेकपाले गरेको कमिटिका संयोजक छन् । खनालसँग देशको राजनीतिक परिस्थिति र एमसीसी सम्झौताको भविष्यबारे रिपोर्टर्स क्लबले गरेको कुराकानीः
अब तपाईंहरुको पार्टी एमसीसी पारित गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ ?
यो केन्द्रीय कमिटिको बैठकपछि पार्टी नयाँ उचाइमा अगाडि बढेको छ । यो संख्याको हिसाबले दोस्रो बैठक हो, वास्तविक अन्तरवस्तुका हिसाबले यो पहिलो हो । एकता पछि पहिला बैठक अत्यन्त राम्रो ढंगले सम्पन्न भएको हो । केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो विचारहरु निर्भिकताका साथ राख्नुभएको छ । यो बैठकमा कसैले पनि पूर्व एमाले, माओवादी बोलेनन् । सबै नेकपा भएर प्रस्तुत भएको देख्दा हामीलाई गर्व लागेको छ ।
गर्व लागेपनि प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभएको एमसीसी त पास भएन समिति नै बनाउनुपर्यो अब पारित नहुने भयो होइन ?
यसको सवालमा त्यस्तो ठूलो विवाद केही भएको छैन । हामीले एमसीसी के हो बुझेका छैनौं । त्यसलाई अध्ययन गर्न पार्टीले एउटा कार्यदल बनाओस् सो मार्पmत अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भएकाले कार्यदल बनेको छ । हामी त्यो कार्यदलबाट आएको राय अनुसार अगाडि बढ्छौं । तर वैचारिकदेखि अन्य सवालमा पार्टी एकढिक्का भएर उभिएको छ ।
तपाईंले एक ढिक्का भनिरहँदा एमसीसीको बारेमा पार्टीभित्र एकमत देखिएन नि ?
पार्टीमा कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र लक्ष्य एउटै छ । त्यसैका आधारमा २०७७ साल चैतमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्छौं । त्योभन्दा अगाडि सबै स्थानीय, प्रान्तीय र जिल्लास्तरीय कमिटिहरुका अधिवेशन गर्छौं । अहिलै अभैm ८ लाख सक्रिय सदस्यहरु मानिएको छ । त्यो संख्यामा सदस्य सबैले नविकरण गर्दछन् कि गर्दैनन् । केही लाखले नविकरण गरेको कुरा अस्ति आइसहेको छ । सबै सदस्यहरुको नविकरण गर्दा ८ लाख मात्रै हुन्छौं कि त्यो बढ्छौं नविकरण गरेर हेर्छौं । त्यसपछि पार्टीलाई नयाँ ढंगले परिचालित गर्दछौं ।
एमसीसीको अध्ययन कार्यदलको नेतृत्व पाउनुभएको छ, अब कति दिनभित्र अध्ययन गरेर नेतृत्वलाई बुझाउनुहुन्छ ?
यसबारे हिजोबाट नै कामको थालनी गरिसकेका छौं । हिजै पहिलो बैठक बसेर कार्यादेशबमोजिम वृस्त्रित रुपमा छलफल गर्यौं । अध्ययन सामाग्रीको फेहरिस्त पनि तयार गरिसकेका छौं । छलफलबाट निस्किएको योजनाअनुसार सकेसम्म हामीलाई १० दिनको म्याद दिइएको छ । त्यो म्यादभित्रै काम सक्ने गरी अगाडि बढेका छौं ।
तपाईंहरुको छलफलबाट एमसीसीमा अहिले देखिएको विवादको प्रभाव परेको रहेछ ?
अब पार्टीले देशव्यापी रुपमा जुन ढाँचामा अगाडि बढ्नुपरेको छ । संविधानले जुन ढाँचा अगाडि सारेको छ । संघीयता, समावेशीता र संविधानका मूल्य र मान्यतालाई दृढतापूर्वक समातेर अगाडि बढ्छौं । त्यसमा संविधानलाई परिमार्जित र परिस्कार गर्न सुरुवात गर्दछौं । साथै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काममा पनि लाग्छौं ।
तपाईंको भनाइअनुसार यो संसदबाट पारित हुँदैन हो ?
अमेरिकासँग हाम्रो अहिलेको मात्रै सम्बन्ध होइन, परम्परादेखिको हो । एमसीसी हुँदा पनि सम्बन्ध छ र नहुँदा पनि कायमै रहन्छ । एमसीसीको बारेमा विगतका सरकारले ध्यान दिएका छन् कि छैनन् । त्यसमा अध्ययन गरेर एउटा दृष्टिकोण हामीले दिने हो । त्यसले सम्बन्ध बिगार्नुभन्दा अझ राम्रो बन्छ ।
तपाईंहरुले विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहनुभएको छ, त्यसमा ५५ अर्ब रुपैयाँ जुन अमेरिकाले दिएको छ त्यो नलिँदा समस्याहरु त आउला नि ?
त्यस्ता अनुदानहरु अरुबाट लिइरहेका छौ्रं, नेपालीहरुबाट पनि लिइरहेका छौं । एमसीसी नहुँदैमा विकास र समृद्धिका लागि साधनस्रोत अभाव हुन्छ भन्ने लाग्दैन । सबैभन्दा ठूलो सहयोग भनेको हाम्रो देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वामान र स्वतन्त्रता हो । यिनै कुरालाई ध्यान दिएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विकास गर्नुपर्छ । हामीलाई तल पार्ने गरी आएको सहयोग हो कि होइन त्यसलाई अध्ययन गर्न खोजेको मात्रै हो ।
अमेरिकाले दिने सहयोग लिने नलिने निक्र्योल कार्यदलले गर्न सक्छ ?
त्यसलाई अध्ययन गरेर एउटा सुझाव दिन्छौं । त्यसको आधारमा हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्छ ।
त्यो सुझाव अहिलेको संसद् अनुमोदन नगरी आउने सम्भवना अगाडि बढ्यो ?
हामी अहिले केही भन्दैनौं । तथ्यहरुका आधारमा सत्य पत्ता लगाउने विधिबाट अगाडि बढ्छौं । अहिले नकारात्मक पूर्वाग्रह र सकारात्मक आग्रह केहीबाट अगाडि बढ्दैनौं ।
नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीले ढिला नगरौं भन्दाभन्दै अध्ययन गरेर बस्दा त अन्यौलता त सिर्जना भयो नि ?
कांग्रेसले के गर्दै छ भनेर राष्ट्रको मापदण्ड बन्न सक्दैन । नेपाली कांग्रेसले राम्रो–राम्रो काम गरेको भएत आज नेपाल स्वर्ग बनिसक्थ्यो । उसले नगर्नुपर्ने काम र मापदण्डहरु अगाडि सारेर देशले आज दुःख पाइरहेको छ ।
त्यसोभए यसमा कांग्रेसले भनेर हुँदैन, तपाईंहरुले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो लागु हुन्छ हो ?
बिलकुदै यसको बारेमा हामी एदमै नयाँ धरातलबाट अध्ययन गर्दछौं । र, त्यसभित्रको सत्य बाहिर ल्याउँछौं । त्यही सत्यताको आधारमा अगाडि बढेर अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्छौं ।
यो अनुदान लिनुभएन भनेत समस्या जटिलतातिर जाला नि ?
यदि कुनै कारणले यो एमसीसी हामीले लिन सकनौ भने पनि अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो बनिरहन्छ ।
त्यसोभए नेकपाले अमेरिकी सरकारले दिएको अनुदान लिँदैन हो ?
अहिले नै हामी त्यसो भन्दैनौ । अध्ययन गर्ने प्रक्रियामा मात्रै छौं । संसारका सबै देशहरु नेपालका मित्र हुन् । उनीहरुसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गदछौं । तर, कसैसँग पनि हामीलाई तलपार्ने गरी आएको सन्धि, सम्झौता हाम्रो पार्टी र सरकारले गर्दैन ।
त्यसोभए राष्ट्रिहित विपरित आएको अनुदान सरकारले लिँदैन ?
अहिले हामीले लिइसकेका छैनौ । छानविन गर्न हामीलाई पार्टीले अधिकार दिएको छ । त्यो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दछौं ।
कार्यदलमा पनि विवाद छ नि ?
कार्यदलभित्र पनि कसैका वाद, संवाद र प्रतिवाद हुनसक्छन् त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्छ । ‘बादेबादे तत्व बोध’ त हो नि । यस्तै बहस र छलफलबाट नयाँ निष्कर्षमा पग्छौं ।
नयाँ निष्कर्ष भनेको के हो, यो अनुदान लिन कि नलिने ?
कुनै पनि मुलुकबाट पाइने सम्मानजनक अनुदान हामीले लिनुपर्छ । सम्मानजनक छैन भने लिनुहुँदैन ।
त्यसोभए यदि अमेरिकाले दिएको अनुदान सम्मानजक छैन भने नलिन पनि सक्छ नेपालले ?
त्यो बारेमा त हामी भर्खर अध्ययन गर्दैछौं । कार्यदलले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ अनि मात्रै केही भन्न सक्छौं ।
तपाईंको पार्टीका केन्द्रीय समस्यहरु शीर्ष नेताहरु सुविधाभोगी भए सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ भन्दा पनि तपाईंहरुको ध्यान त्यतातिर गएन त ?
अहिलेको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा सबै कुरामा विस्तारपूर्वक छलफल गरेका छौं । पार्टीका वैचार, राजनीतिक विषयदेखि लिएर नेताका सम्पत्ति छानविनका विषयमा पनि ब्यापक रुपमा छलफल गरेका छौं । नेताहरुका मात्रै होइन कार्यकर्ताको पनि सम्पत्ति छानविन गरेर पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय कमिटि प्रतिबद्ध छ । त्यहाँ निर्वाचन प्रणालीदेखि महिलाहरुको सहभागितालाई समेत कसरी व्यवस्थित र ३३ प्रतिशत पुर्याउने भनेर छलफल गरेका छौं ।
सरकारको कामकारबाहीको बारेमा तपाईंहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
त्यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौं । सरकारले जुन ढंगले काम गरिरहेको त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ भन्नेमा छौं । यसपालिको प्रतिवेदनमा पनि अलिकति समीक्षा आएको छ । त्यो दृष्टिकोणका आधारमा तीनवटै सरकारको समीक्षा गरिन्छ । त्यसपछि सवल र निर्वल पक्ष छुट्ट्याइन्छ । यो बीचमा सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने जस्तो स्थिति पनि देखिएको थियो । अबदेखि पार्टीले नै सरकार सञ्चालन गर्नेगरी यो बैठकले दिशानिर्देश गरेको छ । तीनवटै तहका सरकारहरु पार्टीद्वारा नै सञ्चालित हुन्छ ।
अब पार्टीले सरकार चलाउने हो ?
अब सरकार पार्टीको भिजन, निर्देशन र मार्गदर्शनमा चल्छ । सरकारले ठिक गरेको छ कि छैन भनेर पार्टीले मनिटरिङ गरेर चलाउने हो । त्यो भयो भने मात्रै हामी समाजवादतरि उन्मुख हुन्छौं । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व लुज भयो भने हामी समाजवादतर्पm अगाडि बढ्दैनौं ।
त्यसोभए प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ ?
हो, अब प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्छ । यही एमसीसी पनि उहाँले त तुरुन्तै पास गरौं भन्नुभएको थियो । तर पार्टी कमिटिले मानेन । त्यसकारण अब पार्टीले निर्देशन दिन्छ भन्ने कुरा यी घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ ।
“२६ हप्तामै बच्चा जन्मिँदा १२ दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो”
प्रतिफलका लागि सनराइज फष्टले बुक क्लोज गर्दै
‘व्यवसायमा सफलता पाउन यसरी बनाउनुस् आफ्नो व्यवसायीक योजना’
'माथिबाट के निर्देशन आउला भने जस्तो होइन, आफ्नै सिर्जनशीलतामा काम गर्नुपर्छ '
कोरोनाको कहरमा तरकारीको मूल्य बढ्नुको कारण